‘खोलामा बाढी आउँदा मान्छे तर्न सक्दैनन्, तार्दिन्छौँ भन्दै मान्छे आउँछन्, काँधमा बोकेर तारेर पैसा लिन्छन् । सरकारले के गर्ने ?’ प्रधानमन्त्रीले निःसंकोच भन्छन् । तर, खोला तर्न पुल छैन र पैसा तिरेर मान्छेको काँध चढेर खोला तर्नुपर्छ भने सरकार किन चाहिन्छ ? आश्चर्य ! यिनै प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा झोलुंगे पुल बनाउँछु भनेर चुनाव लडेका हुन् । […]
काठमाडौं – गरिबीको रेखामुनि रहेका आवसविहीन नेपालीलाई आवासको अधकार दिनका लागि आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक अधिकारको रुपमा धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई कार्यन्यन गर्न सहकारी विकास मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको छ। मन्त्रालयले तयार पारेर संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकसको […]
सुनमा भारी गिरावट, चाँदी तोलमा १५ रूपैयाले घट्यो
काठमाडौं । बिहिबार सुनमा भारी गिरावट छ । सुन प्रतितोला ४०० रुपैयाँले घटेको छ । आज प्रतितोला ५५ हजार ६०० रुपैयाँको कारोबार भइरहेको सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अघिले दिन ५६ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । तेजावी सुन भने ५५ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यता, चाँदी पनि तोलामा १५ […]
झुक्याएर गुणस्तरहीन सामान बेचे ५ वर्ष कैद
काठमाडौँ, ३१ साउन । भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले अखाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्नेलाई कडा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । झुक्याएर गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने व्यक्तिले ५ बर्ष कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय पाउने भएका छन् । मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा १०८ मा झुक्यानमा […]